अमेरिकाले स्वीकृति दिएको एक मात्रा लगाए पुग्ने कोभिड खोपका यस्ता छन् विशेषता Canada Nepal
काठमाडौँ। अमेरिकी नियामक निकायले तेस्रो कोभिड खोप स्वीकृत गर्दै जोन्सन एन्ड जोन्सनको एक मात्रा लगाए प्रभावकारी हुने खोपलाई अनुमति दिएको छ। फूड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन एफडीएले स्वीकृत गरेको सो खोप फाइजर र मोडेर्नाको खोपभन्दा सस्तो एवम् सामान्य चिसो तापक्रममा राख्न सकिने खालको छ।
परीक्षणमा यो खोपले गम्भीर बिरामी हुनबाट बचाउने र समग्रमा ६६ प्रतिशत प्रभावकारी भएको देखिएको छ। यो खोप बेल्जियमको कम्पनीले निर्माण गरेको हो। सो कम्पनीले अमेरिकालाई जून महिनाको अन्त्यसम्ममा एक अर्ब मात्रा उपलब्ध गराउने वाचा गरेको छ। अमेरिकी नागरिकका लागि पहिलो मात्रा खोप अगामी साता उपलब्ध हुने बताइएको छ।
यूके, ईयू र क्यानडाले खोप मगाइसकेका छन् भने कोभ्याक्सले गरिब राष्ट्रहरूका लागि पाँच अर्ब मात्रा मगाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले स्वीकृतिलाई सबै अमेरिकीको लागि खुशीको खबर भन्दै कोभिडविरुद्धको सङ्घर्ष नसकिएको बताए।
उनले एउटा विज्ञप्तिमा भनेका छन्: "हामी आजको समाचारले खुशी भए पनि म सबै अमेरिकलाई हात धोइरहन, सामाजिक दूरी कायम राखिरहन र मास्क लगाइरहन अनुरोध गर्छु।"
अमेरिका, दक्षिण अफ्रिका र ब्रजिलमा गरिएको परीक्षणमा यो गम्भीर बिरामी हुनबाट जोगाउन ८५ प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको छ र सामान्य लक्षण भएका सङ्क्रमणहरू जोड्दा यसको प्रभावकारिता ६६ प्रतिशत देखिएको छ।
यो खोपको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको खोप लगाएका व्यक्तिहरूको मृत्यु नभएको र खोप लगाएको २८ दिनपछि सङ्क्रमण भएका कोही पनि अस्पताल भर्ना हुनु नपरेको नतिजा हो। नयाँ प्रकारको कोरोनाभाइरसमा यो कम प्रभावकारी देखिए पनि त्यसविरुद्ध पनि गम्भीर बिरामीको हकमा यो प्रभावकारी नै रहेको बताइएको छ। अमेरिकाबाहेक बहरेनले यो खोपलाई बिहीवार स्वीकृति दिएको थियो। बीबीसी
फाल्गुण १६, २०७७ आइतवार ११:३१:५५ बजे : प्रकाशित
# अमेरिकाले स्वीकृति
क्वालालमपुर - सैनिकले सत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि भएको आन्दोलनका क्रममा म्यानमारमा अहिलेसम्म कम्तिमा ७०१ जनाको मृत्यु भएको छ । आन्दोलनमा लागेकै आरोपमा अरु तीन हजार एक सयभन्दा बढीलाई सुरक्षाकर्मीहरुले थुनामा राखेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । गत फेब्रअरी १ तारिखका दिन म्यानमारको सेनाले सत्ता नियन्त्रणमा लिएको घोषणा गर्दै नेताहरुलाई थुनामा राखेको छ । सेनाले सत्ता हातमा लिएदेखि नै म्यानमारमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ ।
सेनाले नियन्त्रणमा रहनु भएकी नेतृ आङ सान सुकीलाई सोमबार नयाँँ फौजदारी अभियोग लगाइएको उहाँका वकीलले जानकारी दिएका छन् । उहाँमाथि ६ वटा थप मुद्दामा अभियोग लगाइएको छ । न्यापिटअ पाँच र याङ्गु एउटा मुद्दा लगाइएको उहाँका वकील मीन मीन सो एएफपीलाई बताएका छन् । पछिल्लो आरोप मुलुकको प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन कानून अन्तर्गत रहेको पनि वकीलले थप जानकारी दिएका छन् ।एएनआई
चैत्र ३०, २०७७ सोमवार २१:१०:३५ बजे : प्रकाशित
तेहरान - इरानको एउटा परमाणु केन्द्रमा आइतबार क्षेप्यास्त्र प्रहार गरी आक्रमण गरिएको त्यहाँका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन् ।
इरान आणविक ऊर्जा संगठन (आइएइओ)का प्रमुख अली अक्बर सालेहीले सरकारी टेलिभिजनमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यस आणविक विरोधी आतङ्कवादसँग लड्न आग्रह गर्नुको साथै यस्तो निक्रिष्ट कार्यको कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन् ।
उक्त आक्रमण देशको औद्योगिक र राजनीतिक प्रगतिका विपक्षीहरुले गरेका, जसको संवृद्धि परमाणु उद्योगको विकासलाई रोक्ने उद्देश्य रहेको पनि साहेलीले बताएका छन् । यस आक्रमणको पछाडि कसको हात रहेको छ सो भने प्रष्ट नभएको उनले जानकारी दिए । दुर्घटनाका कारणहरुको अनुसन्धान भइरहेको र थप विवरणहरु पछि प्रकाशित गरिने उनले बताएका छन् ।
सन् २०१५ मा भएको एउटा परमाणु सम्झौतालाई पुनर्जीवित पार्ने कूटनीतिक पहल भइरहेका बेला यो नयाँ घटना भएको छ ।
सन् २०१८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकालाई उक्त सम्झौताबाट अलग गरेका थिए । तर हालका राष्ट्रपति जो बाइडेनले त्यसलाई पुनः अघि बढाउने बताउदै आएका छन् । यस घटनामा कसैको पनि मृत्यु नभएको र चुहावट पनि नभएको इरानको फार्स न्यूज एजेन्सीलाई सरकारी अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।एएफपी
चैत्र ३०, २०७७ सोमवार १९:४१:२१ बजे : प्रकाशित
म्यान्मारमा सेनाको ‘कू : आङ सान सुकीमाथी ६ ओटा नयाँ फौजदारी अभियोग
याङ्गुन – म्यान्मारमा सेनाको ‘कू’ पछि अपदस्थ गरिएका नागरिक नेता आङ सान सुकीलाई सोमबार नयाँ फौजदारी अभियोग लगाइएको उहाँका वकीलले जानकारी दिएका छन् ।
सेनाले निर्वाचनका बेला ब्यापक धाँधली भएको दाबी गर्दै आएको छ । उक्त चुनावमा आङ सान सुकी र उहाँको ‘नेशनल लिग फर डिमोक्र््यासी’ दल निर्वाचित भएको थियो । निर्वाचन आयोगले धाँधलीको उक्त दाबीलाई खारेज गरिदिएको थियो ।एएफपी
चैत्र ३०, २०७७ सोमवार १८:२३:३८ बजे : प्रकाशित
# आङ सान सुकी
चीनका खोपहरू कम प्रभावकारी भएको चीनकै स्वास्थ्य अधिकारीको भनाइ
चीनका प्रमुख रोग नियन्त्रण अधिकारीले चीनमा निर्मित कोभिड खोपहरूको प्रभावकारिता कम भएको बताएका छन्। एक पत्रकार सम्मेलनमा गाउ फूले प्रभावकारिता वृद्धि गर्नका लागि खोपहरूको सम्मिश्रण बनाउने विषयमा सोचिएको जानकारी दिए।
नेपालमा पनि चीनले अनुदानमा दिएको आठ लाख मात्रा कोभिड खोप अहिले लगाउन थालिएको छ।
चीनले चार प्रकारका खोपहरूलाई स्वीकृति दिएको छ जसमध्ये विदेशमा गरिएको परीक्षणमा केही खोपको प्रभावकारिता ५० प्रतिशतसम्म पनि देखिएको छ।
पछि गाउले सम्मेलनमा राखेको आफ्नो भनाइलाई गलत व्याख्या गरिएको बताएका छन्। चीनमा १० करोडभन्दा बढी मानिसले स्वदेशमा निर्मित खोपको कम्तीमा एक मात्रा लगाएका छन्।
चिनियाँ सरकारले भने आफ्ना खोपहरू प्रभावकारी भएको र चिनियाँ खोप लगाएका विदेशीलाई मात्रै चीन प्रवेशाज्ञा दिने बताउँदै आएको छ।
गाउले के भने?
चीनका रोग नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख ग्वाओ फुले शनिवार हाल उपलब्ध खोपहरूको सुरक्षा दर उच्च नरहेको बताएका थिए।उनले प्रभावकारिता वृद्धि गर्नका लागि खोपहरू मिसाउने विषयमा विचार गरिएको सङ्केत गरे।
उनले खोपको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न मात्राको सङ्ख्या परिवर्तन गर्ने र दुई मात्राबीच समयावधि बढाउने जस्ता चरणहरूको चर्चा गरेका थिए। तर पछि उनले सरकारी पत्रिका ग्लोबल टाइम्सलाई "संसारभरिका खोपहरूको सुरक्षा दर कुनै बेला कम र कुनै बेला बढी हुने" बताए।
"तिनीहरूको प्रभावकारिता कसरी बढाउने भन्नेबारे संसारभरिका वैज्ञानिकहरूले सोच्नुपर्छ," उनले पत्रिकालाई भने। उनले चिनियाँ खोपहरूको प्रभावकारिता कम भएको आफ्नो भनाइबारे त्यो "पूर्ण रूपमा गलत व्याख्या" भएको बताए।
गाउका दुवै भनाइहरूलाई चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले खासै स्थान दिएका छैनन्।तर सामाजिक सञ्जालमा भने उनको पहिलो भनाइको आलोचना भएको छ। केही मानिसले उनलाई "चुप लाग्न" सुझाव दिएका छन्।
चिनियाँ खोपको प्रभावकारिता
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कम तथ्याङ्क भएका कारण चिनियाँ खोपको प्रभावकारिताको विषय लामो समयदेखि अस्पष्ट छ।ब्रजिलमा गरिएको परीक्षणमा चीनको सिनोभ्याकको प्रभावकारिता ५०.४ प्रतिशत देखिएको थियो। त्यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले स्वीकृति प्रदान गर्न आवश्यक ५० प्रतिशतभन्दा अलिकतिले मात्र बढी हो।
टर्की र इन्डोनेशियाका अन्तरिम तथ्याङ्कहरूले भने उक्त खोपको प्रभावकारिता ९१ देखि ६५ प्रतिशत देखाएका छन्। पश्चिमा देशहरूमा उत्पादित फाइजर, मोर्डेर्ना र आस्ट्राजेनेका सबै खोपको प्रभावकारिता ९० प्रतिशत वा अझ बढी छ।यो समाचार बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएको हो ।
चैत्र ३०, २०७७ सोमवार १२:५६:३९ बजे : प्रकाशित
अमेरिकाद्वारा यूक्रेनविरूद्ध कडा कदम नचाल्न रूसलाई आग्रह
वासिङ्टन - अमेरिकाले यूक्रेनमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमलाई आफूले नजिकबाट नियालेको भन्दै रूसलाई यूक्रेनविरूद्ध कडा कदम नचाल्न रूसलाई आग्रह गरेको छ ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले आइतबार अमेरिकी समाचार संस्था, एनबीसी टेलिभिजन,लाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा रूसलाई चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, “यूक्रेनविरूद्ध कडा कदम चालेमा यसको ‘परिणाम’ रूसले ब्यहोर्नुपर्नेछ ।
उहाँले भन्नुभयो, “मैले भन्नुपर्छ अमेरिका यूक्रेनी सिमानामा रूसी कदमप्रति गम्भीर चासो ब्यक्त गर्दछ ।” अमेरिकाले यूरोप क्षेत्रमा सैन्य व्यवस्थापन विषयमा कुरा गर्ने क्रममा अमेरिकी विदेशमन्त्रीको उक्त भनाइ आएको हो ।
“अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यस बिषयमा बहुतै प्रस्ट हुनुहुन्छ । यदि रूसले जथाभावी वा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएमा यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ,” ब्लिङ्केनले भने ।एएफपी
चैत्र ३०, २०७७ सोमवार ०९:४२:१५ बजे : प्रकाशित
विश्वभर १० करोड ९८ लाख कोरोना संक्रमित निको भए, कुन देशमा कति मृत्यु र संक्रमित ?
काठमाडौं । विश्वका विभिन्न देशमा पछिल्लो समय कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुन बढ्न थालेको छ । कोरोना संक्रमणका बीच विभिन्न देशमा कोरोना खोप पनि लगाइएको छ । वर्ल्डोमिटर्सको तथ्यांक हेर्दा अहिले भारत लगायत केही देशमा संक्रमितको संख्या बढेको छ ।
वर्ल्डोमिटर्सको तथ्यांक अनुसार विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या १३ करोड ६६ लाख ३९ हजार २ सय ८६ पुगेको छ भने कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या २९ लाख ४९ हजार ४ सय ८ पुगेको छ ।
त्यस्तै हालसम्म विश्वमा १० करोड ९८ लाख ६५ हजार ९ सय ७७ कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भइसकेका छन् । त्यस्तै अमेरिकामा मात्र कोरोनाको संक्रमणबाट ५ लाख ७५ हजार ८ सय २९ जनाको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या ३ करोड १९ लाख १८ हजार ५ सय ९१ पुगेको छ ।
त्यस्तै ब्रजिलमा कोरोनाको संक्रमणबाट मुत्यु हुनेको संख्या ३ लाख ५३ हजार २ सय ९३ पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या १ करोड ३४ लाख ८२ हजार ५ सय ४३ पुगेको छ ।
चैत्र ३०, २०७७ सोमवार ०९:४०:०१ बजे : प्रकाशित